“Ismaaciil C. Geelle, wuu la kala saftay Shacabka Soomaaliyeed” Hogaamiyaha Xisbiyada Mucaaradka Jabuuti (Dhegeyso)
December 6, 2012 9:33 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Waraysi gaar ah oo Ogaal Radio la yeeshay Madaxda guud ee Dalada Xisbiyada Mucaaradka Jabuuti, mudane Ismaciil Geedi Xareed ayaa sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed kala qaybin, wuxuuna mudanahaasi sheegay in Ummada Soomaaliyeed ay si guud uga qayb qaateen Xoreyntii iyo taageeradii Shacabka Walaalahood ah ee reer Jabuuti markii ay xornimada qaadanayeen , wuxuuna mudanuhu afka ku dhuftay in Shacabka Soomaaliyeed aan loo baahnayn in lala kala safto, loose baahnaa in la isku keeno, wuxuuna mudanuhu sheegay in arrinkaas ay shacab ahaan aysan ku raacsanayn Ismaaciil C. Geelle.
Mudane Ismaaciil Geedi Xareed
Hadalka ka soo yeeray Madaxda guud ee Dalada Xisbiyada Mucaaradka Jabuuti mudane Ismaciil Geedi Xareed ayaa cadayn u ah in 100% Ismaaciil Cumar Geelle uu la kala safan yahay shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna uu God dheer ku riday Wadajirkii Ummada Soomaaliyeed.
Mudane Ismaciil Geedi Xareed oo ka hadlayey Xaalada Jabuuti ayaa quus ka uujiyey siyaasada dowlada Ismaaciil Cumar Geelle. Dhaqaalaha ayuu ka dayriyey, Dimoqradaiyad la’aan iyo arrimo kale, wuxuuna kaloo sheegay in Wadanka aysan jirin wax madax banaani ah.
Dhegeyso Waraysiga Ismaaciil Geedi Xareed
Waa Markii ugu horeysay Taariikhda Muwaadin u dhashay dalka Jabuuti isla markaasma ka mid ahaa raggii usoo halgamay Xornimada Jabuuti uu Afka ku dhifto dhibaatooyinka Siyaasadeed ee Ismaaciil Cumar Geelle uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed , isagoo u haysta haddii Soomaaliya ay sii bur-bursanaato inay ku dhismayso Jabuuti, Fakirkaas oo aan ahayn mid kasoo baxay Caqli Saliim ah.
Shacabka Soomaaliyeed inta waxgaradka ah ayaa tan iyo intii Jabuuti lagu soo dhisay dowladii C/qaasim Salaad Xasan iyo barnaamijkii 4.5-ka ay ummadda Soomaaliyeed ay dareentay in fakirkaasi uu ahaa mid Soomaali lagu kala figeynayey , kuwii xataa waagaas u qabay inay fakirkaasi saxan yahay, markii danbe ka qoomameeyey kaddib markii ay arki waayeen wixii loogu sheekeeyey inuusan sax ahayn.